Naing BSell | Item - 1 day diet အဆီကျ​ဆေး
🌻1 day diet အဆီကျဆေးသောက်နည်း🌻
🌻1. မနက်အိပ်ရာထ အစာမစားမီ အစာနှင့် နာရီဝက်ခြားပြီး 1 လုံးသာသောက်ပေးပါ
🌻2. ဆေးသောက်သူသည် ရေသောက်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်မည်။
👉 စိုးရိမ်စရာမလိုပါ မိမိစိတ်ကြိုက်ရေများများသောက်ပေးပါ ။
🌻3. ဆေးမသောက်မီ မိမိကိုယ်အလေးချိန်ကုိအရင်ချိန်ထားပါ
🌻6. ဆေးသောက်ပြီး 1 လမှာတင် မိမိ ပေါင်ချိန်ဘယ်လောက်ကျတယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။⭐⭐⭐